Illinois masora mitemo - kushandisa pachako cannabis & pamutemo muIllinois 'CRTA
Unoda Kuti Upinde Mukambani YeMutemo Cannabis?
Ko iwo mutemo mutsva unotii nezvekushandisirwa wega cannabis muIllinois?
Mutemo mutsva uri pamutemo kushandiswa kwekunakidzwa mbanje wakapasiswa muI Illinois muna Chivabvu 31, 2019. Nyika yacho yakaremekedza wechi11 munyika kubvumidza kushandiswa kwekunakidzwa mbanje, asi nyika yekutanga kunyoresa pamutemo cannabis nemutemo maitiro.
Zvinoenderana nemutemo mutsva uyu we cannabis, "General Assembly inowana uye inozivisa kuti kushandiswa kwe cannabis kunofanirwa kuve pamutemo kwevanhu vane makore makumi maviri nemasere kana kupfuura."
Illinois pamutemo mitemo
Pazasi tinokurukura idzva Illinois Weed Mitemo izvo zvave kushanda nhasi kubva muna Ndira 1, 2020, zvichikwira. Rangarira kuti mitemo ye cannbis inoenderera nekukurumidza, saka gara uchitarisa kumashure kune iyo iripo ikozvino mitemo ye cannabis mu Illinois.
Ndiani anotenderwa Kutengesa Marijuana?
Pakutanga, marezenesi ane mvumo chete anobvumidzwa kutengesa mbanje kana bhiri razova mutemo muna Ndira 2020. Mamwe marezenisi anozopihwa kune zvimwe zvitoro pakati pegore.
Pamwe, pane huwandu hwakanaka hwema disensaries munzvimbo dzakasiyana dzedunhu. Pakutanga kwa2020, zvinofungidzirwa kuti pedyo nezvitoro mazana matatu zvichange zvichitengesa mbanje.
Nekudaro, zvicharamba zviri kumatare emakanzuru netaundi kusarudza kuti vangatengesa mbanje vanogona kushanda munzvimbo dzavanotonga.
Kupi Kutsiva Marijuana?
Zvinoenderana nemutemo mutsva uyu, kuputa cannabis kuchabvumidzwa kumba uye mukati menzvimbo dzevanotengesa mbanje. Nekudaro, kuputa kunorambidzwa munzvimbo dzinotevera:
Nzvimbo dzeruzhinji, dzakadai semigwagwa nemapaki
Mune mota dzemotokari dzingave dzega kana imwe
Pedyo nemahofisi emapurisa, kana padyo nevatyairi vebhazi rechikoro vanenge vachiri pabasa
Mukati megadziriro yechikoro. Nekudaro, kusabvumirwa kunoitwa nekuda kwenyaya yekurapa mbanje
Pedyo pane chero munhu ari pasi pemakore makumi maviri nemasere
Kunyangwe kuputa mbanje panzvimbo dzemba yako kubvumidzwa, varidzi vezvivakwa vane kodzero yekurambidza zvakafanana mukati menzvimbo yavo. Makoreji nemayunivhesiti zvakare vachabvumidzwa kurambidza kuputa masora mukati memasangano.
Kukura Kweasora Mumwe Kunogona Kuitika
Sekureva kwemutemo, vagari vekuI Illinois vanozobvumidzwa kuva nemakumi matatu emaruva e cannabis, mashanu magiramu e cannabis concentrate, uye mazana mashanu emamirioni ezvigadzirwa zve cannabis zvakasvinwa. Zvigadzirwa zveCannabis zvakamisikidzwa zvinosanganisira tinctures uye edibles.
Mutero wekutengesa uchaiswa kune ese zvigadzirwa zvembanje. Semuenzaniso, zvigadzirwa zvine iyo THC iri pasi pe 35% ichave nemutero wekutengesa wegumi muzana. Edibles uye chero cannabis yakaiswa zvigadzirwa ichaiswa pamutero pa10%. Zvigadzirwa zvine THC musungwa weinopfuura makumi matatu neshanu muzana zvichaita mutero wekutengesa wechingangoita 20%.
Kunze kwemutero wekutengesa, 7% yemutero wakakura uchaiswa kune mbanje inotengeswa nevarimi kumadhiri. Zvinonyanya kuitika kuti, pakupera kwezuva, mutengo uyu uchaendeswa kumutengi.
Marijuana Yekutengesa Inobva Kupi?
Parizvino, kune makumi maviri evarimi vekurima mbanje muIllinois. Pakutanga kwaJanuary 20, aya achangova chete zvivakwa zvinobvumidzwa kukura mbanje. Mukati megore, varimi vekugadzira hupfumi vanofarira kukura mbanje vanozobvumidzwa kuendesa marezinesi avo kunyorera. Marezenisi achapihwa kunzvimbo dzinogona kukura kusvika pamakumi mashanu ematanho emamita emasora.
Mumwe Unogona Kukudza Marijuana?
Kurimwa kwembanje kuchave pamutemo kune avo vanotora mbanje nekuda kwekurapa. Varwere ava vanozobvumirwa kukura mbichana shanu dzembanje chero nguva. Kune rimwe divi, varaidzo vembanje vanoshandisa mbanje havabvumidzwe kudyara mbanje mudzimba dzavo. Kuita izvi kuchakwezva mubairo wejeneta remadhora mazana maviri.
Ndiani anotenderwa Kukura Cannabis muIllinois
Kana iwe wakanyoreswa pasi pekushandiswa kwetsitsi kwekurapa cannabis chirongwa, uye uri mukati meyakaganhurwa neyakagadzwa nemutemo, iwe unokwanisa kukura mbanje. Unofanirwa zvakare kuve mugari wenyika ino kuti ubvumidzwe kukura sora kumba. Zvinoenderana nemutemo uyu, mugari akadaro "Munhu anogara mudunhu kwemazuva makumi matatu."
Kana ukakurira mbanje, iwe unofanirwa kuteedzera zvirimwa. Unogona kuva nemumiriri kuti akuitire izvi kwenguva pfupi kana usipo. Izvo zvakati, zvirimwa hazvifanirwe kuwanikwa kana kushandiswa nevamwe vanhu vasina mvumo.
Maitiro Ekukura Kwazvo Cannabis Pamusha
Zvinoenderana nemutemo, zvirimwa zvembanje zvinofanirwa kurimwa munzvimbo yakavharwa uye yakakiyiwa. Izvi zvichaona kuti zvidyarwa hazvigone kuwanikwa nevanhu vasina mvumo. Zvinenge zvisiri pamutemo kukura zvidyarwa munzvimbo inogona kuwanikwa neruzhinji.
Pamusoro pezvo, chero munhu akanyoreswa kurima cannabis chirimwa chinorambidzwa kupa chirimwa kana chero chinonzi infnabis chakaisirwa chigadzirwa kune vavakidzani, shamwari, kana chero munhu upi zvake nenyaya iyoyo. Kuita izvi hakuzongokwezese chirango chete, asi zvakare kuchatungamira kudzoswa kwemusha uchikura kurudyi.
Kupi Kuti Utore Mbeu dzeMarijuana?
Mbeu dzembanje dzichapihwa munzvimbo dzakasiyana dzakabvumidzwa kutengesa mbanje. Izvo hazvisi pamutemo kutenga mbeu pachinzvimbo chemumwe munhu. Avo chete vakanyoreswa pasi pekushandiswa kwetsitsi ndivo vanobvumidzwa kutenga mbeu uye nekurima zvirimwa zve cannabis zvisina rezinesi.
Cannis Shandisa uye Kuburitswa neVanhu Under Under 21
Zvinoenderana nemutemo mutsva, kuve ne cannabis nemunhu chero upi zvake ari pasi pemakore makumi maviri nemasere imhosva. Kurangwa kwekukanganisa kwakadaro kunoenderana nemamiriro ezvinhu aripo, uye anogona kusanganisira:
Kupomedzerwa rezinesi rekutyaira kana munhu wacho achityaira mota panguva yaakatadza
Fine yeisingasviki madhora mazana mashanu kana mubereki kana muchengeti achibvumira chero munhu ari pasi pezera zera kushandisa mbanje
Jail term kana paine dzimwe mhosva dzakapara kuitwa uchikundwa nembanje
Paunenge uchizodikanwa kuti uburitse magwaro ekuzivisa zera rako kana uchitenga zvigadzirwa zvembanje, ruzivo rwako pachako runenge ruchidzivirirwa. Vanotengesa havazodikanwa kuti vanyore ruzivo rwako pachako. Kana vaita, ivo vanozofanira kutanga vatora mvumo yako.
Kana bhiri iri rangova mutemo, avo vanoda kutora mbanje kune mafaro kana ekurapa vanozove nenguva iri nyore yekuwana zvigadzirwa zvembanje zvavanoda. Ivo zvakare vachawana kukosha kwemari yavo nekuti zvese zvekutengeserana zviitiko zvichaitwa zvinoenderana nemutemo.
Nekudaro, avo vari pasi pemakore makumi maviri nemasere vanofanirwa kurega kushandisa kana kuve ne mbanje uye chero zvigadzirwa zvayo zvakabatana nekuti izvi zvinogona kuvazadza mudambudziko nevateveri vemitemo.